टेलिकमको एडिएसएल इन्टरनेट स्लो छ या डिस्कनेक्ट भैरहन्छ ? यसो गर्नुहोस् | युनिभर्सल खबर
Home प्रबिधि टेलिकमको एडिएसएल इन्टरनेट स्लो छ या डिस्कनेक्ट भैरहन्छ ? यसो गर्नुहोस्
यदी तपाईं नेपाल टेलिकमको एडिएसएल इन्टरनेट चलाउनुहुन्छ र बेलाबेलामा विभिन्न कारणले ईन्टरनेट डिस्कनेक्ट भैरहने समस्या छ भने निम्न कुराहरुमा खराबी हुनसक्छ ।
– घरमा जोडिएको मेन लाइनमा स्प्लिटर भन्दा अगाडी नै फोन जोडिएको भए फोन चलाउदा इन्टरनेट डिस्कनेक्ट हुनसक्छ ।
इन्टरनेट चलाउँदा प्रयोग गरिने मोडेमको कारणले पनि यो समस्या उत्पन्न हुन्छ । बजारमा पाइने मोडेममा लाग्ने कम गुणस्तरको पावर एडेप्टरका कारण पनि समय समयमा इन्टरनेट डिस्कनेक्ट हुने गर्दछ । तपाईंले बढी गुणस्तरको तथा ब्राण्डेड मोडेम प्रयोग गर्नुभयो भने यो समस्या हट्नसक्छ ।
तपाईंको घरमा जोडिएको विद्युत लाइनमा भोल्टेज कहिले कम र कहिले बढी आउने भयो भने यस्तो हुनसक्छ । साथै मोडेमको कमसल एडेप्टरका कारण पनि यो समस्या देखिन सक्छ ।
पावर सप्लाईमा समस्या छ भने मोडेम आफैं रिस्टार्ट हुन्छ र चलिरहेको इन्टरनेट स्लो हुने र डिस्कनेक्ट हुने हुन्छ । यदि तपाईंको टेलिफोन लाईन तथा मोडेममा जोड्नका लागि प्रयोग गरिएको ज्याक तथा तार राम्रोससँग कसिएको छैन भने पनि इन्टरनेट डिस्कनेक्ट हुनसक्छ ।
यी कुराहरु विचार गरेर तपाईं आफैंले पनि देखिएको समस्या पहिचान गरी के कारणले इन्टरनेटमा समस्या आएको हो थाहा पाउन सक्नुहुन्छ । यदी गर्दा पनि तपाईंको इन्टरनेटमा देखिएको समस्या यथावत् रह्यो भने नेपाल टेलिकमको एडिएसएल शाखाको ग्राहक सेवा केन्द्रमा सम्पर्क गरी जानकारी लिन सक्नुहुन्छ ।
छोरा–बुहारी अमेरिका/अस्ट्रेलियामा दशैंको बेला आमाबुबा बृद्धाश्रममा !